सर्वोच्च अदालतको प्रश्नः बलात्कारपछि पीडकलाई ‘आई लभ यू’ भनिन्छ र ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सर्वोच्च अदालतको प्रश्नः बलात्कारपछि पीडकलाई ‘आई लभ यू’ भनिन्छ र ?
सर्वोच्च अदालतको प्रश्नः बलात्कारपछि पीडकलाई ‘आई लभ यू’ भनिन्छ र ?
माघ ६ गते, २०७४ - ११:०५
बलात्कारसँग जोडिएका घटनामा फैसला गर्नु अदालतका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । खासगरी ‘साथी सम्बन्ध’ मा बलात्कार भएका या यौन हिंसाको रिटमा अदालतका लागि के सम्म स्वेच्छिक हो र के जबर्जस्ती हो भन्ने कुरा छुट्टयाउन गा¥हो हुन्छ ।
भारतमा यस्तै एउटा चर्चित घटनामा अदालतको फैसला अहिले चर्चामा छ । घटना चर्चामा आउनुका पछाडि यसको प्रकृति र यसमा जोडिएका चर्चित पात्र हुन ।
सर्वोच्च अदालतले चर्चित चलचित्र ‘पिपली लाइभ’का सह निर्देशक महमूद फारुकीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि यसले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ ।
उच्च अदालतले फारुकीलाई निर्दोष बताउँदै रिहा गर्ने फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महिलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनको बहसका क्रममा न्यायाधिशहरुले साथी साथीबीच हुने यौनसम्बन्धमा के कति कुरालाई स्वीकृति मान्ने र के कतिलाई जबर्जस्ती मान्ने विषयमा समेत आफ्नो धारणा राखेको छ । पीडित पक्षका वकिलसँग अदालतले सोध्यो– घटनापछि पीडितले आरोपीलाई ‘आई लभ यू’ भनेका बलात्कारका कति मुद्दा देख्नु भएको छ ?
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारका दिन न्यायाधिश एस.ए. बोबडे र न्यायाधिश नागेश्वर रावको बेन्चले पहिलो सुनवाईमा नै उच्च अदालतलाई चुनौती दिने रीट खारेज गरेका थिए । बेन्चले उच्च अदालतले सबै पक्ष विचार गरेर फैसला गरेकोले यसमा हस्तक्षेपको आवश्यकता नभएको फैसला गरेको छ ।
पिपली लाईभका सह निर्देशक फारुकीको घटना निकै चर्चित बनेको थियो । यो घटनासँगै ‘यौनसम्बन्धमा सहमति’का बारेमा निकै चर्चा शुरु भएको थियो । साथी साथीबीच एक सीमासम्म सम्बन्ध हुने तर त्यहीबीचमा महिलाले ‘हुन्न’ भन्दा त्यसको के अर्थ लगाउने ? भन्ने विषयमा फारुकीको मुद्दाले केही नयाँ नजिर समेत अगाडि सारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार, फारुकी घटनामा बलात्कारको आरोप लगाउने महिला र फारुकीका बीचको सम्बन्ध साथी भन्दा अलि बढी नै थियो । प्रमाणहरुका आधारमा दुबै एउटा अन्तरङ्ग सम्बन्धमा रहेको देखिन्छ । महिलाले घटनाअघि फारुकीलाई चुम्बन गरेको र सँगै बसेर रक्सी समेत सेवन गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । तर सँगै बसेर रक्सी पिउनुको अर्थ महिलाले यौनसम्बन्धका लागि स्वीकृति नै दिएको अर्थ बेन्चले लगाउँदैन । तर घटनाको प्रकृतिले दुबैबीचको सम्बन्ध प्राकृतिक भएको अवश्य पनि देखाउँछ ।
कोर्टले महिलाका तर्फबाट फारुकीलाई पठाएको इमेलको उल्लेख गर्दै घटनापछि समेत महिलाले फारुकीलाई प्रेम प्रकट गरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘हुन्न’ भनेपछि ‘हुन्न’ को बहस
साथीसँग कुन सीमासम्मको सम्बन्ध प्राकृतिक हो भन्ने विषयमा फारुकी घटनाले ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो । त्यसमा पनि फैसला आउने बेला संसारभरि नै ‘मी टू’ क्याम्पेन नै चलेको छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सम्बन्धहरुमा ‘हुन्न’ भन्ने कुरामा नयाँ आधार दिएको छ । सर्वोच्चको भनाईमा “कमजोर हुन्न’को अर्थ ‘हुन्न’ भन्ने अर्थमा नहुन पनि सक्छ ।
अदालतको यो फैसलाको असर सम्बन्धहरुमा सहमति या गैर मौखिक प्रतिरोधलाई अदालतले कसरी लिने भन्ने कुरामा पनि पर्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा महिलाका पक्षबाट अधिवक्ता बृन्दा ग्रोवर र अनिन्दिता पुजारीले आफ्नो पक्ष राखेका थिए । उनीहरुले घटनाअघि दुईपटक सहमतिमा भएका सम्बन्धका आधारमा उक्त घटनालाई हेर्न नसकिने तर्क दिएका थिए ।
तर बेन्चले भने यो तर्कलाई स्वीकार गरेन । बेन्चका अनुसार, साथीको मात्रै सम्बन्ध भएको बेला ‘चुम्बन’ हुँदैन । चुम्बनको अवस्था भनेको उनीहरु आपसी सम्बन्धमा हुने कुराको संकेत हो । यहाँ अपरिचितहरु आपसमा भेटका थिएनन् बरु परिचितहरु सम्बन्धमा थिए । बेन्चका अनुसार महिला निकै डराएको कारण फारुकीको प्रतिरोध गरेको कुरा समेत स्थापित नहुने बतायो ।
उच्च अदालतले समेत फारुकी घटनामा सबै अवस्थामा ‘हुन्न’ को अर्थ ‘हुन्न’ नै हुन्छ भन्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो । कतिपय घटनाहरु हेर्दा महिलाद्वारा ‘कमजोर हुन्न”को अर्थ “हुन्छ” पनि हुनसक्छ ।
माघ ६ गते, २०७४ - ११:०५ मा प्रकाशित